ပantibိဇီဝဆေးများကိုသောက်စဉ်အရက်သောက်သုံးခြင်း - သင်အန္တရာယ်ကင်းသလား။ - ကျန်းမာရေးပညာရေး | ဇွန်လ 2022
ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကုမ္ပဏီသတင်း ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း သတင်း ရပ်ရွာ ကျန်းမာရေး သတင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ဆီးဂိမ်း ကုမ္ပဏီ ဖျော်ဖြေရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း
အဓိက >> ကျန်းမာရေးပညာရေး >> ပantibိဇီဝဆေးနဲ့အရက်သောက်နိုင်မလား။
နောက်ဆုံးတော့! စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာဒီမှာရှိနေပြီးသင်ဟာအနည်းငယ်ပေးဆပ်မှုအနည်းငယ်နဲ့ပြန်လည်ကန်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ သို့သော်သင်စောင့်ဆိုင်းနေပါကသင်၏ (ဤနေရာတွင်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကူးစက်ရောဂါအမည်ကိုထည့်ပါ) ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့်ပantibိဇီဝဆေးများကိုသင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ အရက်သောက်ခြင်းသည်ဘေးကင်းပါသလော။ သို့မဟုတ်သင်ဆေးအပြီးသတ်ပြီးသည်အထိတရားဝင်ကူးစက်မှုကင်းလွတ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းသင့်သလား။
သင်၏ပြန်လည်နာလန်ထူရေးအတွက် vino ကိုကျော်ပြီးသတ်မှတ်ထားသောယာဉ်မောင်းတာ ၀ န်ထမ်းအဖြစ်မှသာသွားခြင်းကပိုကောင်းသည်ဟု Pharm.D မှ Ph.D ဘရိုင်ယန်ကပြောသည်။ ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ဆေးဝါးကျောင်း ဆီယက်တဲလ်တွင်။
အရက်သည် immunosuppressive သက်ရောက်မှုများရှိပြီး၎င်းသည်သင်ပantibိဇီဝဆေးများကိုသောက်သုံးနေသောကူးစက်ရောဂါကိုတိုက်ဖျက်ရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုတားဆီးနိုင်သည်ဟု Dr. Werth ကပြောသည်။ ထို့အပြင်ပantibိဇီဝဆေးအချို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။
သူကစိတ်မသက်သာတဲ့အစာအိမ်၊ ပျို့ချင်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းစတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုပြောနေတာပါ။
ထို့အပြင် အမျိုးသားအိပ်စက်ခြင်းဖောင်ဒေးရှင်း၏အဆိုအရအရက်သုံးစွဲခြင်းသည်အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကိုထိခိုက်နိုင်သည် ။ အိပ်စက်ခြင်းသည်ကုသခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်သင်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်သည်၎င်းဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်လုပ်ဆောင်နေစဉ်သင့်အား ZZZ အလုံအလောက်မရရှိစေရန်မည်သည့်အရာကိုမဆိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အမှန်တကယ်လုံခြုံမှုအနေဖြင့်သတင်းကောင်းမှာအရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ပantibိဇီဝဆေးများကိုတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်ဤနေရာတွင်သော့ချက်စာလုံးသည် အများဆုံး ။ တူဘုံပiotိဇီဝဆေး amoxicillin နှင့် azithromycin ဥပမာအားဖြင့်၊ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးစင်တာများအရသိရသည် ၂၀၁၆ တွင်ရေးသားထားသောပ270ိဇီဝဆေးညွှန်းပေါင်း ၂၇၀.၂ သန်းအနက် ၅၆.၇ သန်းသည် amoxicillin နှင့် ၄၄.၉ သန်းသည် azithromycin အတွက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့သောသူများကမူ၎င်းတို့ကိုအရက်နှင့်ရောနှောခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ဟုဒေါက်တာ Werth ကပြောသည်။
ဘယ်ပiotိဇီဝဆေးတွေကိုသင်ရနိုင်သလဲ မဟုတ်ဘူး နှင့်အတူအရက်မသောက်ရ
သူကအရက်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုလမ်းကြောင်းနှင့်တိုက်ရိုက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်တိကျသောပantibိဇီဝဆေးများရှိသည်ဟုသူကဆိုသည်။ ထိုသူများသည်အရက်နှင့် တွဲဖက်၍ တိုက်ရိုက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်အကြီးမားဆုံးသောအန္တရာယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မေးခွန်းတစ်ခုအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ? အလံ ( metronidazole ; ၎င်းတွင်အင်္ဂါဇာတ်ပုံစံများနှင့်ပါးစပ်တက်ဘလက်ပုံစံများအတွက်ဆေးညွှန်းများ၊ tinidazole ), Bactrim ( sulfamethoxazole-trimethoprim ) နှင့် Zyvox ( လွိုင်ကော် ) အဓိကပြစ်မှုကျူးလွန်သူများဖြစ်ကြသည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည် အရက်ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ သင်ဤဆေးများသောက်နေစဉ်အရက်ပါသောထုတ်ကုန်များ၊ နောက်ထပ် metronidazole သို့မဟုတ် tinidazole ယူပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်။
ဝှက်ထားသောအရက်အရင်းအမြစ်များအတွက်တံဆိပ်များကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ ပါးစပ်ဆေးများသို့မဟုတ်ချောင်းဆိုးဆေးများတွင်အရက်ပါဝင်နိုင်သည်။ သင်အကူအညီလိုအပ်ပါကသင်၏ဆေးဝါးသည်အလွန်ကောင်းသည့်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော်သင်သောဖြစ်ရပ်အတွက် လုပ်တယ် ဤပofိဇီဝဆေးများနှင့်အရက်ကိုရောစပ်ခြင်းသည်ပြင်းထန်သောဆေးဝါးများအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ၊ အသည်းပျက်စီးခြင်း၊ သွေးတိုး၊ အမြန်နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ အရေပြားဖြန်းခြင်း၊ နှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ Zyvox ကဲ့သို့ပantibိဇီဝဆေးအချို့သည်ဘီယာသို့မဟုတ်ဝိုင်နီကဲ့သို့သောအရက်အမျိုးအစားများကိုပိုမိုဆိုးရွားသည့်တုံ့ပြန်မှုရှိနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဤဆေးများသောက်နေစဉ်မည်သည့်အရက်ကိုမဆိုသောက်သုံးခြင်းကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ Mayo ဆေးခန်းအရသိရသည် ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါတွေကယေဘူယျလမ်းညွှန်တွေပဲ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆေးညွှန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ဆရာ ၀ န်သို့မဟုတ်ဆေးဆိုင်သို့တိုက်ရိုက်ပြောရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုပါသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့သင်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေသည်ဟုသင်သံသယရှိပါကသင်၏ဆရာဝန်ကိုဖုန်းဆက်ရန်မည်သည့်အခါမျှထိခိုက်မည်မဟုတ်ဟု Dr. Werth ကပြောကြားသည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကတကယ်မကောင်းဘူးလို့ခံစားရရင်တော့စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါအတွက်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်အဆင့်ကဘယ်လောက်လဲ
meloxicam ၁၅ မီလီဂရမ်သည် naproxen ဘယ်လောက်နှင့်ညီမျှသည်